Nanmyin ကင်းမျှော်စင် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← le Htat ကြီး Payan Beverage ထုတ်ယူခြင်း
ရတနာ Hsemee စေတီတော် Complex →
အဆိုပါ Nanmyin ကင်းမျှော်စင် အင်းထဲမှာ (အင်း) အထဲတွင်အမရပူရသို့ပြောင်းရွှေ့ခင်အထိဤနေရာတွင်ရပ်တစ်ချိန်ကနန်းတော်ဖြစ်နေဆဲကြောင့်တော်တော်များများအားလုံးဖြစ်ပါတယ် 1841 တမြို့လုံးကပျက်စီးခဲ့သည်သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှ 1838 ငလျင်.
အဆိုပါ Nanmyin ကင်းမျှော်စင်မူလထို့နောက်နန်းတော်ကုန်းမြေရဲ့အလယ်ဗဟိုဘာ၌ရပ်လျက်ရှိသည်ဟုမယ်လို့.
သူ့ဟာသူထဲမှာပျက်စီးထင် 1838 အဲဒါကိုအမှီအဆိုပါ 30 အရပ်ရှည်ရှည်ကင်းမျှော်နောက်ပိုင်းတွင်ပွနျလညျထူထောငျနှင့်သူ့ဟာသူ '' အင်းဝ၏ပိန်ကြုံသောမျှော်စင် '' ၏အမည်ပြောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သည်ယင်း၏အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ဘယ်ကနေငလျင်. ဆောက်လုပ်ရေး၏နေ့စွဲလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး, ဒါကြောင့်အကြားတစ်နေရာရာကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ် 1400 နှင့် 1800 အေဒီ.
သင်နေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း Nanmyin ကင်းမျှော်စင် အင်းထဲမှာ – Google Maps ကို
အဆိုပါ ocre အရောင်ကင်းမျှော်ထိပ်ကနေသင်အင်းဘာတစ်ခုလုံး၏ကောင်းသောအမြင်များရှိသည်မယ်လို့ (အင်း) တော်ဝင်နန်းတော်ခိုင်ခိုင်လုံလုံ.
သငျသညျသေးခဏကတက်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်ကံမကောင်းစွာအဆိုပါ Nanmyin ကင်းမျှော်စင်နေဆဲကျယ်ပြန့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျှက်. ဒါဟာပြုပြင်လက်စသတ်သောအခါအများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မည်, သင်တစ်ဖန်ထိပ်သို့တက်နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးအမြန်ကြည့်ရကျိုးနပ်.